रिब्दीकोट गाउपालिका पाल्पाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीले अक्सिजन नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिएको बताउनुभएको छ । पाल्पापाटीका सम्पादक विष्णु घिमिरे संगको कुराकानीमा आधारित एक अन्र्तवाताः
कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा अक्सिजनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
कोरोना भाइरसको दोश्रो संक्रमणकालमा हामीले अक्सिजन सहितको अस्पताल र आइसोलेसनमा अलि वडी ध्यान दिएका छौं । रिब्दीकोटमा यो करिव २ महिनाको अवधीमा हामीले २ वटा कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याएका छौं । खस्यौलीमा हामीले ५ वेडको कोरोना अस्पताल र देउरालीमा २० वेडको आइसोलेसन तयार पारेका छौं । त्यहाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । हामी संग अहिले ४ वटा अक्सिजन कन्सटे«टर (२ वटा गाउपालिकाले किनेको, २ वटा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले सहयोग गरेको) ४ वटा छन् । अक्सिजन सिलिण्डर १२ वटा छन् । विद्युत आपुर्ति नभएका बेला पनि अक्सिजन कन्सटे«टर चलाउन जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दै छौं । जेहोस रिब्दीकोटका नागरिकलाई अक्सिजन नभएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन दिएका छैनौं, दिने पनि छैनौं ।
रिब्दीकोटमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था कस्तो छ ?
हामीले संचालन गरेको अस्पताल र आइसोलेसनमा २ जना मेडिकल अधिकृत सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरेका छौं । सबै वडाहरुमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति वनाइएको छ । उहाँहरुगै स्वास्थ्यकर्मीहरु घरदैलो समेत गर्नुभाछ, स्वास्थ्यकर्मीको समस्या परेको छैन् । एउटा अस्पतालमा १५,१५ दिनको डिउटी सेडुल मिलाएर काम गर्नुभाछ ।
कतिपय स्थानमा संक्रमित बोक्न सवारीसाधन नपाएका समाचार आएका छन् , रिब्दीकोटमा के छ ?
रिब्दीकोटमा कोरोना संक्रमितले सवारिसाधन नपाएको अवस्था छैन् । गाउपालिकाले नै अक्सिजन सहितका ३ वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । खस्यौली, ठिमुरे र ख्याहाका स्वास्थ्य सस्थाहरुका ३ वटा एम्बुलेन्सहरुले काम गरिरहेका छन् । एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीइ र स्वास्थ्य सामाग्री सहित, विमा गरिदिएका छौं । रिब्दीकोट भित्र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।
रिब्दीकोटमा कोरोना परीक्षणको दायरा कस्तो छ ?
होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका हरुलाई तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर चेकजाच गर्नुहुन्छ, यदी कोरोनाको संका र लक्षण भएमा पीसीआर तथा एन्टिजेन के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेगर्नुभाछ । हामीले पीसीआर भन्दा एन्टिजेन परीक्षण बढी गरेका छौं । मलाई लाग्छ अहिलेसम्म २ सय ५० जति परीक्षण रिब्दीकोटमा भएका छन् ।
धन्यवाद । यो वढो महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । हामीले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरेका छौं । किनकी कोरोना संक्रमित अधिकांश होम आइसोलेसनमै बस्ने र कतिपय जिल्लाहरुमा घरमै मृत्युका घटनाले हामीलाई छोएको छ ।
रिब्दीकोट भन्दा अन्यस्थानबाट आउनुभएकाहरु सिधै घरमै बस्नुहुन्छ । हामीले प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको समिति बनाएका छौं । घरमा आएर बसेको थापा पाउने वित्तिकै वडा अध्यक्ष र स्वास्थ्यकर्मीहरु जानुहुन्छ । सामान्य परीक्षण गर्नुहुन्छ । कोरोनाको लक्षण देखिएमा तुरुन्त परीक्षण गर्नुभाछ ।
संक्रमण पुष्टि भएर पनि जटिल समस्या नदेखिएका होम आइसोलेसनमै बस्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई आवश्यक औषधीहरु घरमै पुरयाउने निरन्तर फलो गर्ने । जटिल समस्या आए तुरुन्त अस्पताल पुरयाउन एम्बुलेन्स पठाउने गरिएको छ । अहिलेसम्म राम्रै छ । त्यस्तो समस्या आएको छैन् ।
कोरोना संक्रमण अझ वढी फैलियो भने भावी योजना के छन् ?
अहिले गाउपालिकाभित्र २ वटा कोरोना अस्पताल संचालन भइरहेका छन् । कोरोना महामारी अझै फैलियो, यी दुई अस्पतालले पनि धान्न सक्ने अवस्था आएन भने ४ वटा अन्य आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखेका छौं । ती ४ आइसोलेसनमा ६० वेड छन् । जतीवेला आवश्यक पर्छ, तुरुन्त संचालन गर्न सक्छौं । कुसुमखोला स्वास्थ्य भवन, बतासे आयुर्वेदको भवन, बतासेकै स्वास्थ्य भवन र बतासेमै सभाहलमा गरी ६० वेड तयारी अवस्थामा छन् ।